Ngo inqubo amalahle kuphakama isidingo ngempela njalo ukufakwa afundwa futha. Ngenxa yalokho ngcono parallel circuit futha dlula isethwe ohlelweni bafudumale. Ngaphambi kokuyibuyisela, kumele wazi ukuthi kungani udinga ukundlula ohlelweni bafudumale. Ngaphezu kwalokho, idivayisi samanje ingasetshenziswa umsebenzi wokulungisa.
Dula kanye nokwenza imisebenzi yayo
Komsele nge valve shutoff noma wesifunda parallel okuyinto ixhunywe esidayisa futhi itheku kwe-futha, kurediyetha noma enye idivayisi ohlelweni, ibizwa ngokuthi dlula noma ipayipi dlula. Ngokuvamile, dlula bafudumale system - ilungu operation dlula. Phakathi emsebenzini walo kokupholisayo kurediyetha iyeke ageleze njengoba kugeleza esidlule.
Ngokuvamile, dlula isetshenziselwa olawula ukunikezelwa ukushisa ezindaweni ezahlukene. Lapho kuhlangene lokushisa inzwa ke ezosebenza ngesikhathi esifanele. Lapho esikhundleni ohlelweni Irediyetha Ukushisa exhunywe kwi kubhayela noma yimuphi omunye umthombo amanzi ashisayo nge dlula.
Ngokufaka i dlula ohlelweni Ukushisa, kubalulekile ukuba banamathele imingcele ethile. Ngokwesibonelo, i-bandwidth Kumelwe kungabi ngaphansi kuka itheku imbobo. Ngamanye amazwi, ukunciphisa nengamukeleki ubukhulu. Kodwa lena kuphela icala uma empeleni akukho valve dlula.
Kubalulekile ukusetha Cranes babe yohlobo olufanayo, isibonelo, ibhola. Kuye indawo yokufaka dlula ungasebenza izindlela ezahlukene. umbuso unomphela ilawulwa lokushisa abalawuli. Ngaphezu kwalokho, kungaba kuphela ukusebenza uma usuqala uhlelo Ukushisa ukunikeza okusheshayo Ukushisa radiators.
Kuye bafudumale system lapho uhlela ukusebenzisa ipayipi dlula, kunezinhlobo eziningana:
Hlola valve dlula. isikimu okunjalo isetshenziselwa kwegazi amaphampu ngezikhathi uqhuba futhi uma kudingeka. Ngemuva kokuqala futha kusuka ngokweqile ingcindezi valve kuvula futhi ivumela kokupholisayo. Endabeni futha-off valve ivaliwe ngokuzenzakalelayo. Lapha into esemqoka - khumbula ukuthi kungenzeka valve ezilimele ngenxa yokushayiswa nokugqwala noma isikali.
Ngaphandle dlula valve. Siyabonga kule divayisi kungaba kwenziwe esizeni ukulungisa ngaphandle ukucisha uhlelo bafudumale. Ngaphezu kwalokho, dlula kuzovumela ukuxhuma ohlelweni Ukushisa endaweni lapho ngaphambili sasingekho kurediyetha.
Njengoba kushiwo ngenhla, uma ufaka i-dlula kuyadingeka ukuze ihambisane nezimfuneko ezithile. I ububanzi we ipayipi dlula kufanele kube kancane ezincane kuno ubukhulu ukunikezela ukubuya umugqa. Ngenxa yalokho, ukugeleza kwamanzi imithetho hydraulics uhambe endleleni amelane, ngokudlula heater. Ukufaka dlula uhlelo Ukushisa kufanele kube eduze ngangokunokwenzeka ukuze heater futhi ngesikhathi enkulu ibanga kungenzeka kusukela yesikhuphukeli.
Uma kukhona amanye amathuluzi namakhono dlula ingaqoqa ngokwakho noma umane ukuthenga ngomumo eyenziwe esitolo okukhethekile. Uma ufaka dlula ibhola valve kuthathelwe indawo ngesikhathi elula lokushisa abalawuli ukulawula lokushisa eyenziwa kwimodi okuzenzakalelayo. Ukuze kuzuzwe umphumela esiphezulu e phakathi dlula kufanele ukushumeka zakudala ibhola-ngokulungisa valve.
Dula nge uhlelo eyodwa ipayipi
Uhlelo Ukushisa kuvamile dlula jumper esetshenziswa ukulawula ukugeleza kokupholisayo. ukuhlobana Maximum ke ozuza eyodwa ipayipi bafudumale system, okuyinto smooths zonke kwamaphutha. Ikhipha circuit dlula kuyinto ipayipi uxhumano (ibhuloho) phakathi ekwazisa a komsele okuphakelayo ngamanzi ashisayo ongena Ukushisa iyunithi enentambo ephuma kurediyetha (umugqa ukubuya).
Ball valve ezibekwe phezu umugqa supply ipayipi a Irediyetha, ngesikhathi okhiqizwayo imigqa heater futhi emgqeni dlula. Cranes ezidingekayo ukuze ukuvala shaqa okungenzeka kurediyetha uma kwenzeka ke elungisa noma omunye umsebenzi, ngaphandle kokuma uhlelo Ukushisa, okuyinto kule nkathi yesikhathi uya ukusebenza ngokusebenzisa dlula ku ibhethri, ngokudlula kudivayisi uqobo.
Dula futha ku umugqa inethiwekhi
dlula Isicelo Ukushisa uhlelo kwegazi futha at isixhumanisi inethiwekhi evumela lonke uhlelo yokusebenza ngempoqo kokupholisayo kwegazi futhi kunyatheliswa zemvelo, isib, uma ukuvala shaqa ngephutha kwamandla kagesi endlini.
Uma uhlelo Ukushisa inikezwa ukundlula futha kwegazi ke njengoba umthetho, emgwaqeni omkhulu umugqa uhlelo parallel futha esikhundleni ibhola ekhethekile umphini lingasethwa non-ukubuya valve. esimweni saso esivamile ivuliwe, esimweni esiphuthumayo stop wamandla kagesi it is kweso ikhiyiwe, ngaleyo ndlela ukusebenza ohlelweni Ukushisa esitshalweni kwegazi zemvelo.
Dula eduze kubhayela
Kulokhu, lo dlula isethwe eduze kubhayela - ngqo ipayipi ukubuya kohlelo bafudumale. Ufaka kufanele kube khona kanye lokushisa aphansi ohlelweni. Ilungiselelo elinjalo awuyiyivumeli umugqa ukubuya kurediyetha ebilayo, dlula inethiwekhi afundwa futha, futhi kuvimbela ukwakheka okungenzeka emoyeni emaphaketheni. Ikhipha lokhu dlula ibekwe ebhanoyini ovundlile, ububanzi kufanele luhambisane ububanzi we umugqa ukubuya.
Dula yalolu hlobo ocushiwe uma kwehluleka uhlelo Ukushisa, ngaphandle kokuqondiswa umuntu. Ngokwesibonelo, lapho umsebenzi wenethiwekhi ekunqanyulweni kwe-futha kwegazi, uma ukuvala shaqa ngokuzumayo ugesi ukugqagqana ukukhiya amadivayisi wahlela dlula, kuvula valve ka iphayiphi esemgwaqweni phakathi esitolo esidayisa futhi itheku Imibhobho esemzimbeni.
Ngenxa yalokho, i-kokupholisayo uqala ukunyakaza agudle main, kanye uhlelo Ukushisa esitshalweni ukuzungeza zemvelo okusamanzi. Ngokwemvelo, esimweni esinjalo Kungcono ukusebenzisa othomathikhi dlula kwegazi futha.
I ububanzi we dlula
Uma kwenzeka lapho yokuxhuma heater okumele asetshenziswe okufanayo ubukhulu dlula amapayipi, futhi ukuthi ulayini main, kuyoba flow the kokupholisayo ngamandla kancane. Kule ndaba, kulesi simo-ke osebenza ezincane ubukhulu design. Ngokwesibonelo, lapho podvodke 3/4 "setha dlula umugqa 1/2".
Dula ohlelweni Ukushisa, ikakhulukazi endabeni inethiwekhi afundwa futha, angabhekwa esinye sezici ezibaluleke kakhulu. ukufakwa kwalo kufanele sigcwaliswe kuhambisana zonke iziqondiso eyayifunwa ubuchwepheshe.
Ngo yesimanje Ukushisa izinhlelo dlula ufeza umsebenzi ebalulekile ukuqinisekisa ukusebenza kwabo okuvamile, yingakho ukufakwa zayo kufanele kube efanele futhi kuhlelwe.
"Global" kurediyetha. Aluminium radiators Global - radiators Sectional
Field Ikhishi KP-125. ikhishi Ungadliwa ensimini
Chandeliers ezenziwe ngokhuni. Iqhwa Homemade ezenziwe ngokhuni
Indlela yokuthola imisebenzi yesibili: imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo